Ny roa dia nahafatesana olona. Ny naharatrana olona kosa dia nahatratra 7. Ny telo tamin’ireo fandratrana dia vokatry ny hamamoana nitondra fiara. Raha mitaha amin’ny tany aloha, nihena ny familiana fiara am-pimamoana. Vokatry ny fanentanana tamin’ny haino aman-jery notanterahin’ny mpitandro filaminana sy ny fepetra hentitra no nampihena izany. Tamin’ireo sendra ny mpitandro filaminana amin’ny fandikan-dalàna, ny andro mialoha sy nandritra ny fetim-pirenena dia nahatratra 74. Polisy iray sy sivily 73 no nohazonin’ny polisim-pirenena izay voasaringotra tamina antony samihafa sy halatra isan-tsokajiny. 43 be izao ireto farany izay voarohirohy tamin’ny asa ratsin’ny faingan-tanana. Nahatratra 636 ny olona nosavain’ny mpitandro filaminana. Niezaka nandrakotra ireo lalambe sy kianja nahavory vahoaka ny polisim-pirenena. Noho ny tsy fahampian’ny isany manoloana ny mponina eto Antananarivo Renivohitra dia hita taratra ho be no ho vitsy ihany izy ireo ka resy tosika raha ilay fifanosehana teo Mahamasina fotsiny ohatra.